संविधान संशोधनले खोस्यो ओली र प्रचण्डको सत्ताः अब के हुन्छ देउवाको ?
केशव घिमिरे : दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकार तेस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । बैशाख ३१ मा प्रदेश नम्बर ३, ४,
सिवी अधिकारी : काठमाडौँ, १७ असार । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको राष्ट्रि«य ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले करिब छ दशक लामो यात्रामा विभिन्न आरोह अवरोहलाई चिर्दै सफलतातिर लम्किरहेको छ । स्थापनाको ५९ औँ वर्ष
(भीष्मराज ओझा) :काठमाडौँ, १६ असार । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी असोज अन्तिम साता र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मङ्सिरको पहिलो सातामा गर्ने तयारी थालेको छ । आयोगले आगामी कात्तिक दोस्रो हप्तामा
(कुमार चौलागाई/नारायण अधिकारी) : कालीखोला (चितवन), १५ असार । काठमाडौँको ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणमा चरम लापर्वाही भएको पाइएको छ । निर्माण कम्पनीले यो वा त्यो बहाना बनाई सडक निर्माणमा
सिबी अधिकारी : काठमाडौँ, १३ असार । सगरमाथाको चुचुरोमा मौसम र आरोही समूहको तालमेल थिएन, तैपनि आरोहीको भीड उत्तिकै थियो । वसन्त ऋतुको यो यामसँगै बा¥ह पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने
रमेश लम्साल : काठमाडौँ, १२ असार । काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालो बनाउने लक्ष्यका साथ काठमाडौँ महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा धमाधम सौर्य बत्ती जडान भइरहेको छ । यही महिनाको अन्त्यसम्म एक हजार
मोहिनी मिश्र रिसाल : काठमाडौँ, १० असार । आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बडो मेहनतका साथ क्युबासँग गर्नु भएको बिभिन्न राजनीतिक सम्झौता र सम्बन्ध नवीकरणको कामले अबभने निरन्तरता
भीष्मराज ओझा : काठमाडौँ, १० असार । हिमाली र उच्च पहाडी छ जिल्लाका ४८ गाविस (तत्कालीन) खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा देखिएका छन् । खाद्य सुरक्षा सञ्जालले विस्तृत अध्ययन गरी धादिङका ५,
डर–त्रास नमानी ढुक्कसँग मतदान गर्नोस् : निर्वाचन आयुक्त शाह
बैतडी, ९ असार । निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले असार १४ गते हुन गइरहेको निर्वाचन बैतडीमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नका लागि जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउनुभएको छ । आज जिल्लाको
पूरानै दललाई भोट हाल्नु बेश !
ईन्जिनियर दिपेन्द्र कंडेल : नेपालको विकास पूरानै राजनीतिक दलहरुबाट संभव छ, तर तीनीहरुलाई यतिवेला क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । खासमा समस्या भनेको राजनीतिक दल र दलका नेताहरुमा छैन् ।
नारायण ढुंगाना : रत्ननगर (चितवन), ६ असार । चितवनको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अति सिमान्तकृत चेपाङहरु तीनसाले खोरीयामा मकै र कोदो उत्पादन गर्छन् । तीनसाल एउटा खोरीयामा खेती गर्छन्, अनि छाडेर
रमेश लम्साल : काठमाडौँ, ५ असार । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले नेपालका विभिन्न छवटा परियोजनामा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने भएकोे छ । दक्षिण कोरियाको जेजुमा यही असार २ देखि ४